Ungazisusa njani iiNtengiso zikaYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungazisusa njani iintengiso zikaYouTube?
Meyi 5, 2021 0 IiCententarios 273
Okwexeshana ngoku iqonga levidiyo eyaziwayo yokusasaza kwi-YouTube igqibe ekubeni ibandakanye iintengiso kwiphepha lakho, elimele ukubuyela umva kubasebenzisi abaninzi, ngakumbi kuba iintengiso zininzi kwaye ziyangena.
Ukonwabela umxholo kuYouTube ngoku kube ngumceli mngeni, ngakumbi abo basebenzisi abangafundanga ukususa iintengiso kweli qonga. Ngeso sizathu namhlanje sikuphathela amaqhinga kunye nezixhobo ezinokukunceda kulo mbandela.
Kuyenzeka ukuba ususe iintengiso ku-YouTube
¿Ngaba uyafuna ukonwabela umxholo we-YouTube ngaphandle kokubona iintengiso ngalo lonke ixesha? Kukho iindlela ezininzi zokususa intengiso engathandekiyo nengamkelekanga kuleqonga levidiyo. Ukufunda indlela yokwenza kunokuba luncedo kwaye kuyimfuneko.
Ngethamsanqa apho izixhobo ezisivumela ukuba siyeke ukubona ezi ntengiso kuYouTube, ngakumbi ezo zibonakala ekuqaleni nasembindini wokuveliswa kweevidiyo, eziqwalaselwa ngabaninzi njengezona zicaphukisa zonke.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, iqonga leYouTube lifake ukhetho apho abasebenzisi babenokuphelisa intengiso kwiividiyo ngendlela elula kakhulu. Inyani yahlukile ngoku. Awusakwazi ukuvimba iintengiso ngokuthe ngqo kwiphepha, kodwa zikho ezinye iindlela.
Uyeke njani ukubona iintengiso zeYouTube kwizikhangeli
Ngaba ukhathele kukubona iintengiso ngalo lonke ixesha kwi-YouTube? Kukho indlela elula yokubasusa ukuze bayeke ukuvela kwisikhangeli sethu.
Kufuneka nje faka ulwandiso kwisikhangeli sakho kunye ne-voila. Zininzi izinto esinokuzicebisa kodwa ngaphandle kwamathandabuzo enye yezona zilungileyo yiAdblock plus, kwaye isimahla. Ukuba ufuna ukuyifaka, kuya kufuneka undwendwele iphepha lomenzi, khetha isikhangeli kwaye uqhubeke.
Kodwa ayisiyiyo kuphela enye indlela abasebenzisi ekufuneka besuse iintengiso kwiYouTube. Unokuzama ukukhuphela i-AbBlocker yesicelo seYouTube esikuvumela ukuba uvimbe zonke iintengiso kwiwebhu.
Susa iintengiso ze-YouTube kwi-Android
Abasebenzisi be-Android sikwazisa neengcebiso kwimeko apho bafuna ukuyeka ukubona iintengiso kwiYouTube. Eyona ndlela isebenzayo kuyo yonke iAdblock ekhoyo kwiifowuni ze-Android. Ngayo unokuthintela ukuba iintengiso zingaveli ngelixa ubukele iividiyo kwiYouTube.
Ukuba ufuna ukubhloka iintengiso zeYouTube kwii-Smartphones kunye neetafile unokuzama ukhuphelo lwezicelo ezikhethekileyo kwesi sihloko, umzekelo uAdaway kunye noAdfree.
Kukho enye indlela elula yokususa iintengiso zeYouTube kwaye kunjalo usetyenziso lwe-OGYouTube. Ungayivula nakwesiphi na iselfowuni ngenkqubo yokusebenza ye-Android. Esi sicelo sisinika enye indlela yoguqulelo lwe-YouTube esinokuthi sibukele iividiyo ngaphandle kwazo.
Susa iintengiso zeYouTube kumanyathelo amane
Siyazi ukuba zininzi izicelo kunye neenkqubo ezinokusinceda sisuse iintengiso zeYouTube, nangona kunjalo kukho indlela elula yokwenza. Uya kudinga amanyathelo amane kuphela:
Ukufikelela ukuya kuYouTube kwaye ukhethe ividiyo ofuna ukuyibona
Khuphela le khowudi (document.cookie = "VISITOR_INFO1_LIVE = oKckVSqvaGw; indlela = /; domain = .youtube.com"; window.location.reload ();) kwaye uncamathisele kwiwindow ebonakala ezantsi kwisikhangeli.
1 Kuyenzeka ukuba ususe iintengiso ku-YouTube
2 Uyeke njani ukubona iintengiso zeYouTube kwizikhangeli
3 Susa iintengiso ze-YouTube kwi-Android
4 Susa iintengiso zeYouTube kumanyathelo amane
Ndingayicima njani i-Instagram yam?